Hantidhawrka fiicnaanta leh wuxuu horay u sii wadi karaa yaraynta cimilada, la qabsashada iyadoo loo marayo tallaabo bulshadeed, siyaasad, iyo suuqyo
Xarumaha qorraxda ee Xarunta Shirarka Minneapolis waxay gacan ka geystaan awooda xarunta. (Sawir: MCC)
Xitaa sida qiimaha bani'aadamnimada, dhaqaalaha, deegaanka iyo qorshaha isbeddelka cimilada ayaa si feejignaan ah u eegaya, gaasaska qulqulka gaaska dabaysha ee caalamiga ah ayaa sii wadaya kor u kaca, xoojinta wakhtiga loogu talagalay ku-meel-gaadhka mustaqbalka yar-yar. Isbeddelka cimiladu wuxuu sii xumeynayaa cadaadiska sii kordhaya ee khayraadka nolosha ah, oo ay ku jiraan biyaha macaan, carrada, iyo kala duwanaanshaha bayoolojiga. Dhammaanteen waxaan leenahay dadaal aan ku doonayno in aan yareeyno qashinka keena isbeddelka cimilada iyo in la kordhiyo awoodda la qabsiga si ay ula qabsadaan saameynteeda.
Machadka McKnight wuxuu wax ka qabtaa yareynta iyo isdhexgalka iyada oo weheliya hadafyada kale ee goobo badan oo barnaamijyo ah, oo ay ku jiraan noo Cilmi-baarista Xoolaha Iskaashatada, Webiga Mississippi, iyo Gobolka & Bulshada barnaamijyada. Sannadkii 2013, gudigeenu waxay dejiyeen a Barnaamijka Cilmi-baarista iyo Cimilada ee Midwest si ay gacan uga geystaan dib u soo noqoshada aagga ugu weyn ee soo saarista hogaaminta ee hoggaaminta nidaam cusub oo nadiif ah, iyo nadaafad tamar leh. Waddooyin muhiim ah oo cusub ayaa ka soo baxaya Dhamaadka Dhexe iyadoo loo marayo isbedelka suuqyada, siyaasadda guud, iyo ficilka bulshada, laga bilaabo magaalooyinka yaryar ilaa magaalooyinka waaweyn. Waxaanu u aragnaa deeqsinimadeena in ay noqoto ciyaaryahan muhiim ah ee ku-meel-gaar ah, kor u qaadidda horumarka iyadoo la jebinayo caqabadaha hoos u dhigaya koritaanka dhaqaalaha tamarta nadiifka ah iyo in ay bulshadeena ku xiraan waddooyinka horumarka aan la dabooli Karin.
Barnaamijka McKnight ee Barnaamijka Cimilada & Tamarta ee Midwest ayaa looga golleeyahay in uu wax ka qabto isbeddelka cimilada iyo kor u qaadida awooda kartida bulshada si ay uga jawaabto saameynteeda. Waxay ka shaqeysaa shuraako dhow oo la xidhiidha deeq-lacageedka kale ee maalgelinta iyo saameeynta maal-gelinta barnaamijyada si loo hormariyo jawiga iyo ujeedooyinka tamarta nadiifka ah ee aan u dhigin xeeladaha tabobarrada ah laakiin waa istiraatiijiyad la isku dubbariday, urur-kooxeed. Waxanu qaadanaa hab isku dhafan, isbeddelka isbeddelka iyada oo loo marayo qodobo badan oo lafdhabar u ah, oo ay ku jirto maalgelinta tooska ah, dib-u-bixinta, maal-galinta, iyo shirarka, iyada oo la adeegsanayo saamayn lagu kalsoonaan karo si ay u dhex galiso dadweynaha iyo asxaabteena bulshadeena.
Maalgelinta PACE waxay dhiirigelisaa tayada tamarta iyo amniga, qaybaha kala duwan, gobolada iyo qaranka.
Tusaalaha noocan ah barnaamijka iskutallaabta iyo wada shaqaynta qaybaha kaladuwan ayaa ah sahaminta maalgalinta Tamarta Nadaafadda Hantida (PACE). Markay ku shaqeyso sharciga, PACE waxay ka caawin kartaa milkiileyaasha guryaha maalgelinta ku-oolnimada tamarta iyo hagaajinta tamarta la cusboonaysiin karo, oo ay dib ugu bixin karaan qiimeynta biilka canshuurta hantida. Ku dadaalida hay'adda McKnight Foundation ee maalgelinta qorshaysan ee sanduuqa iibsiga bondyada PACE ayaa shaaca ka qaaday in bonds ka Midwest ay ka tartan yar yihiin bonds ka gobollada kale ee dalka. Si wada jir ah, shaqaalaha ka socda McKnight's Investment Impact, Region & Communities, iyo barnaamijyada Cimilada & Tamarta ee Midwest, iyagoo gacan ka helaya deeq bixiyeyaasha iyo la-hawlgalayaasha goobta jooga, waxay ogaadeen inay jiraan sababo badan oo ah in korsashada PACE ay uga gaabisay gobolka, oo ay ku jiraan helitaanka tartan kale ikhtiyaariyada maalgelinta iyo dhaqanka bangiga kaas oo xaddidaya waxtarka PACE haddii guriga la iibiyo. Waxaan hadda ka shaqeyneynaa inaan isu keenno maalgashadayaasha iyo u doodayaasha si aan u hagaajino dadaallada lagu doonayo in lagu kiciyo kororka PACE ee Gobollada Dhexe, iyadoo faham dheeri ah laga qabo caqabadaha suuqa ka jira.
Inagoo keenayna khibrad, aragti, iyo xiriirka shaqaalaha shaqaalaha, deeq bixiyeyaasha, iyo la-hawlgalayaasha kale si ay u qaadaan arrintan, waxaanu doonaynaa in aanu ka faa'iideysano fursadaha soo-saarka qaybaha, ku guulaysanno guulaha iyo guul darrooyinka sida fursadaha barashada si loola wadaago beerta, iyo kordhinta saameynta dhaqaalaheenna xaddidan oo ku saabsan arrintan soo socota iyo arrinka degdegga ah.